Windows 10 ကိုဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲ Gadget သတင်း
Windows 10 ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ
Villamandos | | Software များ, Windows ကို
အလိုရှိ Windows 10 ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ? ၎င်းသည်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်မှတီထွင်ခဲ့ပြီးဈေးကွက်သို့ဖြန့်ချိသည့်လူကြိုက်များသည့် operating system ၏နောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဒုတိယအများဆုံးအသုံးပြုသည့်လည်ပတ်မှုစနစ်အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ ၀ င်းဒိုး ၇ သည်သာလွန်သည်။ သုံးစွဲသူအမြောက်အများနှင့်အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးကဏ္ have တစ်ခုလုံးနီးပါး၏အထောက်အပံ့နှင့်ယုံကြည်မှုကိုဆက်လက်ရရှိထားသည်။ တိုင်းဒါမကြာခဏပြောင်းလဲပစ်ရန်။
၎င်း၏ထူးခြားချက်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသောရွေးချယ်စရာများနှင့်ရရှိနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များသည် Windows 10 ကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးလည်ပတ်ရေးစနစ်တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲစေသည့်အရာများဖြစ်သည်။ အပျက်သဘောဆောင်သောဘက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောအချိန်များတွင်၎င်း၏အလွန်နှေးကွေးမှုကိုထပ်မံတွေ့ရှိရသည်။ ဒီနေ့ဖြေရှင်းဖို့ငါတို့မင်းတို့ပြောမယ် Windows 10 ကိုဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲ.
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ ဒီလှည့်ကွက်တွေဟာသင့်ကိုများစွာသောအချိန်တွေမှာမင်းကိုအများကြီးကူညီလိမ့်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာခေတ်နောက်ကျလွန်းတဲ့ကွန်ပျူတာတစ်ခုရှိရင်ဥပမာ၊ သင် Windows 10 ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန်အောက်တွင်တွေ့ရမည့်အရာများကိုသင်ပြုလုပ်သည့်အရာအားလုံး၌ပင်သင်၏ Windows 10 ကွန်ပျူတာကိုအနည်းငယ်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန်နှင့်မြန်နှုန်းအချို့ရရှိရန်သင့်အားအနည်းငယ်ပေးသင့်သည်။
1 Windows 10 နှင့်အတူမည်သည့်ပရိုဂရမ်မျှမစပါစေနှင့်
2 Cortana၊ မင်းကိုငါမလိုတော့ဘူး
4 Windows 10 ၏ဒီဇိုင်း၊ များစွာသောလူများအတွက်ပြနာ
5 Windows 10 Quick Start သည်ပြbeနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်
7 Windows 10 ကိုဖွင့်ပြီး run ပါ
Windows 10 နှင့်အတူမည်သည့်ပရိုဂရမ်မျှမစပါစေနှင့်
သုံးစွဲသူအများစုကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသောပြproblemsနာကြီးတစ်ခုမှာယင်းသည်ဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာကိုစတင်ရန်အမှန်တကယ်ထာဝရတည်ရှိသည်။ ဤပြproblemနာသည်များသောအားဖြင့် operating system နှင့်ဆက်စပ်နေသည်၊ ဤကိစ္စတွင် Windows 10 ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားပရိုဂရမ်တစ်ဒါဇင်ကိုတစ်ပြိုင်တည်းစတင်ရန်ပြင်ဆင်ချိန်တွင်၎င်းသည် operating system နှင့်အနည်းငယ်သာသက်ဆိုင်သည်။
ထိုအကြောင်း များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပျူတာစတင်တိုင်းအချိန်တိုင်းတွင်စတင်သောပရိုဂရမ်အမြောက်အများကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ပါဘူး။ မည်သည့်ပရိုဂရမ်များကို operating system နှင့်စတင်သည်ကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်ဤရွေးစရာကိုဖယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက် Windows 10 start icon ပေါ်ရှိ mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ရပါမည်။ Task Manager, ပြီးတော့ Home tab ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံနဲ့ဆင်တူတယ်။
ဒီစာရင်းထဲမှာ Windows 10 နဲ့တစ်ပြိုင်နက်တည်းစတင်သည့်ပရိုဂရမ်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး System startup အပေါ်သူတို့ဘယ်လိုသက်ရောက်သလဲဆိုတာကိုအသိပေးသည်။ သင်လိုအပ်သည်ဟုမယူမှတ်သောပရိုဂရမ်များအားလုံးကို disable လုပ်ရန်၊ ကွန်ပျူတာကိုသင်ဖွင့်တိုင်းတိုင်းတစ်ပြိုင်နက်တည်းဖွင့်ခြင်းမရှိပါက၎င်းတို့ကိုအမှတ်အသားပြုပြီး disable button ကိုနှိပ်ပါ။ အခြားမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်ဖွင့်နိုင်သည့်အတွက်သင်အလိုရှိသောအရာများကိုသင်ပိတ်ထားနိုင်သည့်ပြnoနာမရှိပါ။
Cortana ၎င်းသည် Windows 10 ၏အကောင်းဆုံးကြယ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်မည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းတွင် virtual assistant သည်အထူးသဖြင့်ကွန်ပျူတာဟောင်းများတွင်အရင်းအမြစ်အမြောက်အများကိုသုံးစွဲသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ PC လည်ပတ်နေလျှင်ဤအချက်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည် ဟာ့ဒ်ဝဲပဲ၊ သင်က Windows 10 ကိုတတ်နိုင်သမျှပိုကောင်းအောင်လုပ်ချင်တယ်။
ထို့အပြင်လက်ထောက်ကဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်မယ့်ပုံရသည်နှင့်အလွန်ဝေးနေဆဲဖြစ်ပြီး, ပို။ ပို။ ဆုံးဖြတ်နေကြသည် နှောင့်အယှက်ကြားဖြတ်ရှောင်ရှားရန်က disable အရင်းအမြစ်များကိုလည်းသိမ်းဆည်းသည်။
Cortana ကိုပိတ်ထားရန်သင်လုပ်ရန်အားလုံးသည်လက်ထောက်၏ကိုယ်ပိုင်ချိန်ညှိချက်များသို့ သွား၍ အမြဲတမ်းနှုတ်ဆက်သည် (သို့မဟုတ်) အနည်းဆုံးခဏဖြစ်သည် ထို့အပြင်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၎င်းကိုပြန်လည်အသက်ဝင်စေပြီး Windows 10 ကိုအသုံးပြုနေစဉ်၎င်းကိုသင်၏သစ္စာရှိခရီးဆောင်အဖော်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၎င်းသည်မိုက်မဲပုံရသည်၊ သို့သော်ကွန်ပျူတာကိုရက်ပေါင်းများစွာထားခြင်း၊ ၎င်းကိုဆိုင်းငံ့ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ session ကိုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်အလွန်နှေးကွေးသောပြbecomingနာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဒါပါ ပစ္စည်းကိုဘယ်တော့မှမပိတ်ဘဲအသုံးပြုထားသောမှတ်ဉာဏ်သည်ဤဆိုလိုသည်နှင့်လုံးဝလွတ်မြောက်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥပမာအားဖြင့်၊ အရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်ဖြင့်မှတ်ဉာဏ်ပမာဏများစွာအသုံးပြုသောဂိမ်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုပါကပြproblemနာသည် ပို၍ ပင်ကြီးမားနိုင်သည်။
တစ်ရက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာ Windows 10 ကွန်ပျူတာကိုရက်သတ္တပတ်များစွာနဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာအောင်ဆက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အခုတော့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုချင်တာကသင်အဲဒီလိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ အနည်းဆုံးရက်အနည်းငယ်တိုင်းပြန်လည်ဖွင့်ပါ။ ဒါဟာသင်အပူတပြင်းအောင်တက်အဆုံးသတ်နိုင်နှေးကွေးသောစနစ်။
Windows 10 ၏ဒီဇိုင်း၊ များစွာသောလူများအတွက်ပြနာ
Windows 10 စျေးကွက်ကို ၀ င်ရောက်သောအခါ၎င်းသည်၎င်း၏ယခင်ပုံစံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဗေဒဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကြောင့်ဒီဇိုင်းဆွဲရန်နှင့်ခွဲခြားရန်ရှင်းလင်းသောကတိက ၀ တ်ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အသုံးပြုသူများ၊ အထူးသဖြင့်ပစ္စည်းအဟောင်းများရှိသူများကိုထိခိုက်စေခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မှာသေချာသည်။ ထိုဥပမာသည် Operating System အသစ်တွင်ရှိသည့်သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့တွင်အရင်းအမြစ်များစွာယူထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အခြားအရာများအတွက်လိုအပ်သည်.
အပြုသဘောဆောင်တဲ့အပိုင်းကဒီ animations တွေကိုအချိန်မရွေးရပ်တန့်စေခြင်း၊ Windows Start ခလုတ်ပေါ်ရှိမောက်စ်ညာခလုပ်ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့် System ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ပြီးတာနဲ့အဲဒီမှာကျနော်တို့ကဝင်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည် အဆင့်မြင့်စနစ်ဖွဲ့စည်းမှုပေါ်လာပါလိမ့်မည်ပြတင်းပေါက်အတွက် ay အဆင့်မြင့် options များရွေးချယ်ပါ အပိုင်းအတွင်းပိုင်း စွမ်းဆောင်ရည် ငါတို့သုံးရမယ် configuration ကို နှင့်အတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်ရွေးချယ်စရာများ ကျနော်တို့၏ထို option ကိုတွေ့လိမ့်မည် အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများ Windows 10 ကာတွန်းနှင့်ဒီဇိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားရှုထောင့်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပိတ်နိုင်သည်။
၀ င်းဒိုး ၁၀ ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်တဲ့အခါမှာသင်အသုံးပြုနေတဲ့အရာနဲ့ဘာမှတူမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ထိတ်လန့်မသွားစေနဲ့။
Windows 10 Quick Start သည်ပြbeနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်
၀ င်းဒိုး ၁၀ ယူဆောင်လာတဲ့အသစ်အဆန်းတွေထဲကတစ်ခုက အမြန်စတင်ပါ၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်နည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သော်လည်းအကျိုးကျေးဇူးများထက်ပိုမိုသောပြgenerနာများဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်း operating system ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာစတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ထိုအကြောင်း တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤ Startup အမျိုးအစားသည် Windows 10 ၏ startup ကိုနှေးကွေးစေပြီးပြgenerနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဖြေရှင်းနည်းကတော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Power Options ကို ၀ င်ပြီး Option ကိုရှာရပါလိမ့်မယ်။ Start / Off ခလုတ်တွေရဲ့အပြုအမူကိုရွေးချယ်ပြီးအားသာချက်အသစ်မှာ Change the unavailable configuration ကိုနှိပ်ပါ။ ယခုတွင်သင်သည် Quick Start လုပ်ဆောင်မှုကိုမြင်တွေ့ရပြီး၎င်းကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားပြီးပါက၎င်းသည်သင့်အားအကျိုးကျေးဇူးများထက်ပြmoreနာပိုများစေပါက၎င်းကိုပိတ်ထားလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် Windows 10 ကိုအမြင့်ဆုံးသို့မြှင့်တင်ရန်ဤရွေးချယ်မှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ဤရွေးချယ်မှုကိုသင်ရှာမတွေ့ပါကသင်နောက်ဆုံးပေါ် Windows 10 update ကို install လုပ်ထားသော်လည်း၊ ကွန်ပျူတာအားလုံးအားမထောက်ပံ့သောကြောင့်စိတ်မပူပါနှင့်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ခန့်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ အင်တာနက်သည်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်းနိယာမကိုအခြေခံသည်။ သို့သော်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်နှင့်လက်တွဲပြီး Windows 10 သည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အများစုလက်ချောင်းများဖြင့်ဖြတ်သန်းသွားသောအဆင့်သို့ရောက်သွားသည် ဒါပါ အသစ်သော operating system ၏ update system သည်ကွန်ရက်များ၏ကွန်ယက်မှသာမကအခြားကွန်ပြူတာများမှအကြောင်းအရာများကို download ပြုလုပ်နိုင်စေသည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုအခြားသူများ၏ downloads အတွက်ဆာဗာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း။
Windows 10 ကိုအနည်းငယ်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့်သင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုထူးခြားစေရန်နှင့်မည်သူကိုမျှဝေမျှရန်ကျွန်ုပ်တို့ Windows 10 Settings သို့သွားပြီး Update and Security option ကိုရွေးပြီး Advanced Options ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်ဆုံးတွင် သင်မွမ်းမံချက်များကိုမည်သို့ပေးပို့လိုသည်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဤတွင်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုသောနေရာမှအပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းကိုပိတ်ထားရမည်။
Windows 10 ကိုဖွင့်ပြီး run ပါ
Redmond အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည် ၀ င်းဒိုး၏ပထမဆုံးဗားရှင်းကိုဖြန့်ချိပြီးကတည်းကသုံးစွဲသူများကိုဂရုစိုက်ရန်နှင့်ဂရုစိုက်ရန်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး Windows 10 တွင်သင့်ကွန်ပျူတာ၏စားသုံးမှုနှင့်အထွေထွေကျန်းမာရေးတို့အကြားပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်အထိ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ။
သို့သော်၎င်းသည်သုံးစွဲသူများစွာအတွက်ပြaနာဖြစ်နိုင်သည် အမြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရရှိရန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာ Windows 10 ကိုအပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်စေရန်ပြုလုပ်သင့်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ Power options ကို ၀ င်ရောက်ဖို့ Windows 10 Start ကိုညာဖက်နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ သင်၏အသင်းအတွက်နောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ငါတို့ရဲ့အကြံဥာဏ်ကြောင့် Windows 10 ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့သင်ကောင်းကောင်းစီမံပြီးပြီလား။။ ဤစာမူသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသည့်လူမှုကွန်ယက်များမှမှတ်ချက်များအတွက်သီးသန့်ထားသည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြပါ။ Windows 10 operating system အသစ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန်နောက်ထပ်အကြံဥာဏ်များရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ ၎င်းသည်အလုပ်လုပ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤစာရင်းကိုတိုးချဲ့မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » Windows 10 ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ
"Instant Pickup" (သို့) ၂ မိနစ်အတွင်း Amazon မှ ၀ ယ်ယူမှုကိုမည်သို့စုဆောင်းမည်နည်း